Agoosto | 2012 | WEEJIDOW
Archive for Agoosto, 2012
WAR DEG DEG AH: KENYA OO DIYAARAD DAGAAL LAGA SOO RIDEY
Agoosto 31, 2012
WAAJIDPRESS – 30 AUG 2012:
Daqiiqado ka hor ayaa weerar dhanka cirka Iyo dhulka isugu jira waxaa degmada Afmadoow kasoo qaaday ciidamo fara badan oo ka tirsan Kuwa Kenya kuwaas oo isku dayay inay isku ballaariyaan dhulka howdka ee Jubooyinka waxaana gaadiidka Ciidanka Kenya ay ku soo baxeen wararka aanu ku heleynaa in ay gaarayaan Ilaa 70 gaari oo kuwa dagaalka ah ayna dhanka hawada ka wehlinayaan ilaa 5 diyaaradood oo nooca qumaatiga uduulo ah.
Kooxda Al Shabaab oo duulaanka lagu soo qaadey ayaa waxaa lagu soo waramayaa iney afka ciida u dartey ciidankii duulaanka ahaa oo cirka iyo dhulkaba kasoo weerarey Shabaabku meelihii ay joogeen.
wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidankii duulaanka ahaa ee soomaalida iyo kenyaatigu is baheysanayey ahaa laga soo ridey hal dayaaro oo nooca qumaatiga u kaca ah kadib markii qoriga Lidka dayaaradaha ah ay la heleen shabaabku sida ay dadka deegaanku ussheegeen wakaalada BANA oo meelahaasi la xiriirtey.
Rasmi ahaan deegaan ahaan goobta ay shabaabku kusoo rideen dayaarada ayaa waxaa lagu sheegey inta u dhaxeysa deegaanada Miiddo Iyo Afmadoow laakiin ay ku dhacday Tuulo Oomane.
Xarakada Shabaabku weli si rasmi ah aan ugu hadlin Dayaarada lasoo ridey, sidoo kale kama aysan hadlin dowlada kenya weli laakiin waxaa la filayaa saacadaha soo socda iney ka hadli doonaan weliba ay shaacin doonaan khasaaraha dagaalka dhimasho dhaawac oo aan weli si faah faahsan loo ogeyn halka ay la egyihiin.
AMIIN CAAMIR OO SHARIIF XASSAN U GAFAY
Kartooniistaha Caanka ah ee AMin Caamir ayaa dhankiiisa Sawir ku muujiyay Shirqool la sheegay in ay Maleegayana Dowlada Kenya iyo Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku fashilmay in uu isku soo sharxo jagada Madaxweyne.
Shariif Xasan waxa uu Kenya kulamo kula qaatay Madaxad sare ee Dalkaasi waxa ayna kawada hadleen sidii loo boobi lahaa Qeyraadka Badda Soomaaliya si taasi u ugu fududaatana Shariif Xasan Kenya ka dalbatay in C/Wali Gaas uu codadka Xubnaha Baarlamanaka ee isaga taageersan ugu shubo si madaxweyne u noqdo.
Sawirka Amin Arts soo sawiray ayaa muujinaya in Shariif Xasan ku gor gortamayo in uu diyaar u yahay in uu wareejiyo codadkiisa hadii lasiinayo lacag iyo Wasiirka Maaliyada oo uga dhagtay aadna uu u jecelyahay si akoonkiisa lacagta ku dhaceyso usii kororto.
Beelaha Digil iyo Mirifle oo waqti dheer ugu jirey inay mar un qabtaan hogaanka ama madaxtinmada Soomaaliya(Daawo Muuqaal ahaan)
Beesha raxanweyn oo hor kacaayo Shariif Xasan sheekh Aadan ayaa rajadii ay ka qabtey inay mar un noqdaan madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa rajadaas waxay noqotey mid aan waxba ka jirin ka dib markii ay beeshaas ku guuleysatey gudoonka baarlamaanka, iyadoona uu horey u sheegay Kornel Xasan Maxamed Nuur shaati gaduud inaanba beeshaas loo ogoleyn inay madaxweyne ka noqoto dalka Soomaaliya.
DAAWO: SHAATIGADUUD OO LEH RAXANWEYN WAA IN AY MADAXWEYNE KA NOQOTAA SOOMAALIYA:
Beeshaan digil iyo Mirifle oo waqti dheer ugu jirey inay mar un qabtaan hogaanka ama madaxtinmada dalka Soomaaliya ayaa arintaas ay mar kale noqotey mid ay rajadeedu yaraatey ka dib markii uu dhawaantaan ku gulleystay gudoomiyaha baarlamaanka Prof. Maxamed Cismaan Jawaari oo ka soo jeedo beeshaas taas oo marka la fiiriyo saami qeybsiga 4.5 uusan u ogolaaneyn beeshaasi inay isu soo sharaxaan xilka madaxweynanimo iyadoona ay arintaas dhabar jab weyn ku tahay Shariif Xasan sheekh Aadan oo u sharaxnaa xilkaas islamarkaana ka soo jeedo beeshaas, Laakiin beeshaan ayaa sida uu sheegay hogaamiye kooxeed hore oo xilka wasiirka maaliyadana soo qabtey Kornel Xasan Maxamed Nuur shaati gaduud waxay tahay beeshu mid xaq u leh inay madaxweyne ka noqoto dalka Soomaaliya iyadoona sida uu sheegay ninkaas xillgii shirkii dalka Jabuuti ee lagu soo dhisay dowlada Soomaaliya inay beesha raxanweyn xaq u leedahay madaxweynanimo laakiinse arintaas ay is hortaag ku sameeyeen beelaha hawiye iyo daarood oo ay dabada ka riixeyso dowlada dalka Jabuuti ayagoona ay waliba sameeyeen sadbursi weyn taas oo uu ninkaas sheegay in lagu qasbay beesha digil iyo Mirifle inay qaataan gudoomiye baarlamaan oo aysan wax madaxweynanimo ah aysan xaq u lahayn taasna ay keentay inuu shirkaas isaga soo baxo.
DEG DEG: Dagaaladii ugu qaraaraa oo xilligaan ka soconaaya inta u dhaxeyso Kismaayo iyo Afmadow
Dagaalo qaraar ayaa waxay xilligaan ka soconayaan inta u dhaxeyso Magaalada Kismaayo iyo Degmada Afmadow ee Gobolka Jubbada Hoose, waxaana dagaaladaan laga dareemay gebi ahaanba Magaalada Kismaayo.
Dagaaladaan oo ay ka qeyb qaadanayaan diyuuradaha dagaalada ayaa waxay si rasmi ah ay uga soconayaan inta u dhaxeyso Deegaanada Birta Dheer iyo Cago Libaax, isla-markaana dagaaladaan ayaa yimid kadib markii ay si wadajir ah ay u soo wada qaadeen Ciidamadda Huwanta.
Ciidamadda Huwanta ayaa waxay weeraradaan ay ka soo kala qaadeen Cago Libaax iyo Afmadow, iyadoo duulaanka ugu xoogan ay ka soo qaadeen dhinaca Degmada Afmadow, oo ay ka soo baxeyn ciidan lixaad leh.
Dagaalada xilligaan ka soconaaya inta u dhaxeyso Birta Dheer iyo Caga Libaax ayaa waxaa ka qeyb qaadanaaya diyuuradaha dagaalada ee Dowladda Kenya, gaar ahaan diyuuradaha Qumaatiga u kaca ee Helicapters-ka loo-yaqaano.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in Xoogaga Shabaab ay si weyn isaga caabinayaan Ciidamadda Huwanta oo ku soo qaaday dagaalo qaraar, oo ay labada dhinacba faraha uga gubanayaan, sida ay sheegayaan wararka aanu ka heleyno inta u dhaxeyso Magaalada Kismaayo iyo Degmada Afmadow.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dagaaladaan ay dadku u garteen inay yihiin dagaaladii ugu cuslaa oo ka qarxa inta u dhaxeyso Afmadow iyo Kismaayo, kolka loo-eeggo miisaanka xoogga leh ee ay dagaaladu ku soconayaan.
Labada dhinac ayaa waxaa la-dhihi karaa waxay dagaaladu isu adeegsanayaan hub walbaa oo ay faraha ku heystaan, iyadoo ay xusid mudan tahay in dadku isaga barakaceen Deegaanada ay xilligaan dagaaladu ka soconayaan.
Banaan-bax ballaaran oo ka soconaaya Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay “Fillo Sawirada”
Banaan-bax ballaaran oo lagu taageeraayo Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Cusmaan Jawaari, ayaa wuxuu maanta ka soconaaya Magaalada Baydhabo ee Xaruunta Gobolka Baay.
Banaan-baxa maanta ka soconaaya Magaalada Baydhabo oo sii soconaaya muddo dhawr saacadood oo xiriir ah, ayaa waxaa ka qeyb qaadanaaya qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed ee ku dhaqan Magaalada Baydhabo.
Reer Baydhabo ayaa waxay sare u ruxayaan boorar lagu soo xardhay magaca iyo sawirada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Cusmaan Jawaari, oo Talaadadii loo-aqoonsaday in uu yahay Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaliya.
Shacabka ayaa waxay ku qaylinayaan ereyo ay si weyn ugu taageerayaan Prof. Jawaari, waxayna ku sheegeen in uu yahay Muwaadin Soomaaliyeed oo dhab ah, wax badana ka bedeli karaaya xaalada murugsan ee dalka ka jirta.
Banaan-baxayaasha ayaa waxay socod ku soo marayaan wadooyinka waaweyn ee ku yaalla Bartamaha Magaalada Baydhabo, iyagoo markaasi ku qaylinaaya ereyo lagu dhiira-gelinaayo Prof. Maxamed Cusmaan Jawaari.
Ciidamadda Dowladda ee Magaalada Baydhabo ku sugan ayaa waxay sugayaan ammaanka banaan-baxayaasha, isla-markaana banaan-baxayaasha ayaa wuxuu banaan baxoodu uu ku soconayaa si habsami leh.
Si kastaba ha-ahaatee Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Cusmaan Jawaari, ayaa taageero xoog leh uu ka helaaya shacabka iyo Siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyagoona ku sifeynaaya shakhsi karti wanaagsan leh.
WAR SIR AH:- Rag uu ka mid yahay madaxweyne Shariif oo loo baqaayo in maxkamad caalami ah lasoo taago.
Waxaa jirta baqdin ku saabsan in maxkamad lasoo taago rag uu ka mid yahay madaxweyne Shariif ka dib markii la tilmaamay in dad Soomaali iyo Ajnabi isugu jira ay wadaan galaan gal lagu dacweeynaayo ragaasi.
Ragaan ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne Shariif iyo sidoo kale saraakiisha midowgii maxkmadaha Islaamiga ee uu ugu horeeyo Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad Indha Cade iyo xubno kale oo maxkamadaha ka mid ahaa.
Waxaa la sheegayaa in muwaadiniin Soomaaliyeed iyo dad ajaaniib ah oo u dhaq dhaqaaqa xuquuqda aadanaha ay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in xubnahaan lagu dacweeyo, taas oo ah in dagaaladii Midowga Maxkamada ay la galeen dowladii C/laahi Yuusuf iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya ay ku dhamaadeen caruur aad u badan oo arday ah.
In kastoo dadkaan ay sheegayaan in Madaxweyne Shariif uu isaga amrin inay dagaalamaan caruurtaas ayaa hadana waxay sheegeen inuu ahaa gudoomiyaha fulinta islamarkaana uu ka reebi karay in caruurtaasi dagaalada la geliyo, laakiin ninka sida aadka loo doonaayo ayaa ah Indha Cade oo la tilmaamay inuu isaga amarka dagaalka bixiyay maadaama uu dhanka gaashaandhiga u qaabilsanaa maxkamadaha Islaamiga.
Warbixin ay diyaarinaayaan dacwad oogayaashaan ayaa waxay ku sheegayaan in caruur u dhaxeeysa 12 ilaa 18-sano jir ay dagaal geliyeen maxkamadaha Islaamiga, iyadoona dagaalkii Daynuunaay ka dhacay ay ku geeriyoodeen in ka badan laba kun oo caruur arday ahayd misane iskuuladooda laga kaxeeyay.
Xildhibaan Xaabsade oo qaab cajiib ah ku fashilay sir culus oo ku saabsaneed sababta keentay in xubno uu isaga ka mid yahay loo diido inay xildhibaano noqdaan.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Xaabsade oo KA soo jeeda Digil IYO MIRIFLE oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee muranka uu ka taagan yahay inay ka mid noqdaan xubnaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kashifay sir culus oo ku saabsan sababta keentay in rag uu isaga ka mid yahay qalqiil la geliyo kuraasta baarlamaankooda.
Xildhibaanka ayaa sheegay in ugu horeeyn arintaasi laga leeyahay dan siyaasadeed oo gaar ah, waxaana uu sheegay inay jiraan xubno ka mid ah musharaxiinta oo ka baqaaya in cod ay ka waayaan sidaana ay keentay in la diido xubno uu isaga ka mid yahay.
“Ma rabo inaan cid si gaar ah u magacaabo, laakiinse waxaa jira dad ka mid ah musharaxiinta oo ka baqaaya inay waayaan codkeena, waxaana ay rabaan in meesha ay naga saaraan, laakiin warkaasi ma soconaayo” ayuu yiri Xaabsade.
Sidoo kale Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa sheegay in hadii ay rabaan xildhibaan inay noqdaan aanu jirin cid iska hortaagi karta, waxaana uu tilmaamay in qof walba ay ku socoto rabitaanka beeshooda waa sida uu hadalka u dhigaye.
Si kastaba ha ahaatee, maalmahaan qaar waxaa jira qatiyaan ay taagan yihiin hogaamiye kooxeedyadii dalka iyo sidoo kale taageerayaashooda ka dib markii loo diiday inay ka mid noqdaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Muqdisho (WAAJIDPRESS): Gudiga doorashada madaxweynaha ayaa maanta kulan waxay kulan ku yeesheen xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed ee Magaalada Muqdisho, iyadoona markii kulankaasi uu soo dhamaaday ka dib uu warbaahintala hadlay Cismaan livaax oo loo doortay Afhayeenka gudiga doorshada.
Wuxuu sheegay Afhayeenka in doorashada madaxweynaha Soomaaliya la qaban doono 10-bisha soo socota ee September, isla markaana diiwaan galinta musharixiinta ay bilaan doonto kowda bisha soo socota.
Sidoo kale wuxuu sheegay cismaan Libaax in maalinta barito ah ay gudiga mar kale kulan yeelan doonaan ay ka warami doonaan shuruudaha laga doonayo qofka isku soo sharaxaya xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Gudiga Doorashada oo ka kooban 15 xubnood ayaa shalay waxaa isku soo dhex xulay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka dib kulan ay ku yeesheen xarunta Iskool Bulusiyo ee magaalada Muqdisho.
Haatan ayaa xilka Madaxweynaha Soomaaliya waxaa u sharaxan masuuliyiin badan oo uu ka mid yahay madaxweynaha haatan talada sii haaya iyo waliba C/wali Maxamed Cali Gaas.
DAAWO: XASSAN ABSHIR OO SHEEGEY IN QIYAANO KU JIRTEY DOORASHADA
War deg deg ah: Al-Shabaab oo dib ula wareegay Degaanada Laanta Buuro ,Nambar 50,iyo Nambar 60 ee Gobolka Shabeelaha Hoose
Wararka ka imaanaya Degaanada Laanta Buuro ,Nambar 50,iyo Nambar 60 ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay dib ula wareegeen Ciidamada Al-Shabaab iyadoosan uu wax dagaal ah uusan ka dhicin.
Wararka ayaa waxa ey sidoo kale sheegayaan in ciidamadaan Al-Shabaab ay yihiin kuwo wata hubka nuucdasiisa kala duwan oo aroortii Saakay ay dadka kusoo indhaqaadeen Al-Shabaab oo taagan wadooyinka Degaanadaas.
Sida ay u xaqiijiyeed qaar kamid ah dadka Degaanka Warqaad.com ayaa waxa ay sheegeen Degaanka Laanta Buuro ,Nambar 50,iyo Nambar 60 ee Gobolka Shabeelaha Hoose in ay haatan gacanta ku haayaan ciidamada Al-Shabaab oo halkaasi soogaaray saqdii dhexe xalay iyadoo uusan wax dagaal ah uu san ka dhicin.
Qabsashadaan ay qabsadeen Ciidamada Al-Shabaab Degaanadaan ka tirsan Gobolka Shabeelaha Hoose xilli ay halkaasi ay faarujiyeen ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM iyadoona uu difaacoda ciidan la sheegay in uu ubatay dhankaa iyo Magaalada Marka sidaasina ay ugu suurta gashay in ay Al-Shabaab markale dib ula wareegaan.
Meelaha hada shabaab ay qabsadeen waa deegaano u dhow Degmada Afgooye,iyadoo saraakiil katirsan Dowlada oo aan waydiinayay waxa kajira wararkaa waa ay sheegeen in Shabaab ay joogaan Deeganadaas.
Ilaa iyo iminka lama oga qaabka ay wax u dhacaan iyo sida uu noqondoono xaalka xaalkana ilaa iminka masahlana maadaama ay ciidamada Dowlada iyo kuwa Midowga Afrika AMISON ay labada dhinac kajiraan Xoogaga Al-Shabaab.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Agoosto, 2012.